Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): အမေရိကနိုင်ငံမှာ Federal Army ဆိုတာရှိတယ်
at 12/18/2014 07:26:00 PM
The United States had always maintainedasmall army; - See more at: http://www.historynet.com/union-army#sthash.iidcopJk.dpuf
Sai Htwe shared The Irrawaddy (Burmese Version)'s post.
ဟဟဟ အစိုးရသတင်းစာက ဒီလိုရေးသတဲ.လား။ ပေါက်ကရတွေ။
အမေရိကနိုင်ငံမှာ Federal Army ဆိုတာရှိတယ် ဆိုတာမသိရှာဘူးနော်။ သနားပါတယ်။
ကာချုပ်နှင့် The Elders တွေဆုံကာ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး
ဧရာဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ၂၀၁၄
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လန်ဒန်အခြေစိုက် The Elders အဖွဲတို့ ယမန်နေ့ကနေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက်မှုအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးကြောင်းသိရသည်၊ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကာချုပ်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံး စုစုစည်းစည်း ဖွံဖြိုးတိုး တက်စေရန်ကြိုးစားနေကြောင်း ပြောဆိုပြီး၊ The Elders အဖွဲ့မှ နော်ဝေ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Gro Harlem Brundtland က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသော စိန်ခေါ်မှုများအပေါ်နားလည်ကြောင်း၊၎င်းအနေဖြင့် တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် (Federal Uninon Army )ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာတွင်မရှိကြောင်းနှင့် သူတလူငါတမင်းလုပ်နေ၍ မရကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်၏ အပစ်ရပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကို နားလည်ကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု ယနေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာ ဖော်ပြထားသည်။
Lucia Seng Pan and5others like this.
Sai Htwe US Union Army/Federal Army အကြောင်းသိချင်ရင် ဒီမှာဖတ်လို.ရပါတယ်။ http://www.historynet.com/union-army
Facts, information and articles about Union Army during The Civil War Union Army summary: The Union Army...
Munglai Hkyet အဲဒီ ဗမာကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ မင်းအောင်လှိုင် စာ မှ မဖတ်တတ်တာ။ စာ ရဲ့အနစ်သာရ တွေ နားမလည်ဘူး ဒါလုပ် ဒီလိုလုပ် ဆိုတာ ကို ပဲ နာခံနေတဲ့ကောင်ပါ။ချီးပေနေတဲ့ ခွက်ထဲ ဘာ အစားအသောက်ကောင်းမှ ထည့်ပေးလို့မရသလိုပေါ့ ဗျာ။